Tag: kutengesa zvakare | Martech Zone
Tag: kutengesa zvakare
NeChishanu, Gumiguru 10, 2014 David Blume
Ini ndakakokwa kutora chikamu muhurukuro ichangobva kuitika yepaneru kuSales Management Association's Sales Productivity Conference muAtlanta. Chikamu ichi chakange chakatarisana neKushandura Shanduko, paine mapaneru vachipa pfungwa dzavo uye ruzivo rwezvakanaka maitiro uye zvakakomba kubudirira zvinhu. Imwe yemapoinzi ekutanga ehurukuro akaedza kutsanangura izwi racho pacharo. Chii chinonzi shanduko yekutengesa? Izvo zvakanyanyisa uye pamwe hyped? Chibvumirano chakazara ndechekuti, kusiyana nekutengesa kugona kana kugonesesa,